सिएमसी क्यारियर क्विजको आठौं संस्करणका लागि फागुन पहिलो साता
काठमाडौं, १ फागुन- सिएमसी क्यारियर क्विजको आठौं संस्करणका लागि फागुन पहिलो साता काठमाण्डौं अडिसन हुने भएको छ । काठमाडौं अडिसनका लागि फागुन ३, ४ र ५ गतेको दिन तोकिएको आयोजक मिटिङ्ग प्वाइन्ट प्रा.लि.ले जनाएको छ । अडिसनका तीनै दिन फरक फरक स्थानमा लिखित र मौखिक परिक्षामार्फत क्वालिफाइङ राउण्ड खेल्ने टिमको छनोट गरिने छ । राजधानीबाट मात्रै कम्तिमा ५० टिमलाई छनोट गरिने जनाइएको छ ।
क्विज प्रतियोगितामा सामेल हुन चाहने विद्यार्थी तथा विद्यालयले फागुन २ गतेभित्र आफ्नो टिमको नाम दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरु सहभागि हुनसक्ने प्रतियोगिताको मोफसल अडिसन माघ पहिलो साता सम्पन्न भैसकेको छ । पोखरा, बुटवल र चितवनमा सञ्चालन गरिएको अडिसनबाट प्रत्येक क्षेत्रबाट २ टिम गरि कुल ६ टिमले क्वालिफाइङ राउण्ड खेल्नका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिसकेका छन् ।
सन् २०१० देखि औपचारिकरुपमा सुरु भएको करिअर क्विजको यो आठौं संस्करण हो । देशका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरुले सञ्चालन गर्ने प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम करिअर क्विजका बिजेता टिमलाई नगद पुरस्कारसँगै ट्रफि, मेडल, प्रमाणपत्र र आकर्षक छात्रवृत्ति प्रदान गरिने छ ।
राति निदाउन नसकेमा अपनाउनुस् यी उपाय, केही क्षणमै लाग्छ निद्रा
पुरुषको चाहना पुरा गर्न स्कूले बालिकाको प्रयोग !
मरेका मान्छे तपाईँको सपनामा आउँछन् ? यस्तो लाग्दोरहेछ अर्थ
'अल जजीरा'ले लेख्यो : 'धम्कीपछि पशुपति शर्माले गीत हटाए' काठमाडौँ - कतारबाट संचालित विश्वप्रसिद्ध संचारमाध्यम 'अलजजीरा'ले पशुपति शर्माले धम्कीपछि भ्रष्टाचारसम्बन्धि गीत युट्युवबाट हटाएको समाचार लेखेको छ । सोमबार साँझ ५ बजेतिर प्रकाशित ...
कर्णालीका मन्त्रीको दावी : हामी फर्स्ट डिभिजनमा पास भयौं